सरकारी सहायताबारे महावीरले दिए यस्तो जवाफ
सरकारी सहायताबारे महावीरले दिए यस्तो जवाफ
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौँ, जेठ २० print
महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सरकारले डेढ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेपछि उनले त्यसलाई सकारात्मक भन्दै प्रतिकृया दिएका थिए। यसअघिको सरकारले दिएको सहायता रकम अस्वीकार गरेका महावीरले अहिले स्वीकार गरेको भन्दै भएका आलोचनाको जवाफ उनले फेसबुक मार्फत् यसरी दिएका छन् :
आविष्कार केन्द्रलाई डेढ करोडको अनुदानबारेको मेरो पोस्टले धेरै साथीभाइहरु जाग्नु भएको छ।
यो धेरै राम्रो कुरा हो र तपाईंहरुलाई जगाउन नै ति कुराहरु लेखेको हो। सत्य कुरा थाहा पाए पछि तपाईंहरु विचार गर्नुहोस्। अब म कसैको नाम नलिईकन किन त्यस्तो लेख्नु पर्यो भनेर वयान दिन चाहन्छु।
उहाँहरु कै गोपनियताको लागि म नाम भन्न चाहन्न र नाम क,ख, ग, घ भनेर राखेको छु। यो कुरा सबैले एकदमै राम्रोसँग पढ्नुहोस् र कुरा बुझ्नुहोस्। हिजो मैले भान्से टीम भनेको प्रमको एकदमै नजिकको टीमलाई भनेको हो जसलाई अंग्रेजीमा 'किचेन क्याबिनेट' पनि भन्दछन्।
उहाँहरुसँग एसएमएसमा र फोनमा भएको कुराहरुबाट सुरु गर्न चाहन्छु। स्मरण रहोस् कि मलाई राजनीतिमा कत्ति पनि चासो छैन र मैले साना, ठूला, पहाडिया, मधिसे, जनजाति उच्च वर्ग, निम्न वर्ग आदि सबै राजनैतिक पार्टीहरुलाई एकदमै समान दृष्टिले हेर्छु र राजनैतिक क्रियाकलापबाट एकदमै टाढा बस्न चाहान्छु।
घटना नं १, करिब ८ महिना अगाडि भान्से टीमका क नामक व्यक्तिले मलाई आफ्नो परिचय दिंदै हामी तपाईंको पक्षमा छु भन्दै म मेरो ठाउँ बाट सक्ने हजुरलाई सहयोग गर्छु भनेर एसएमएस आयो। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको सबै कुरा तपाईंको फलानो साथीलाई थाहा छ र उसैसँग कुरा गरे हुन्छ अथवा केही कुरा सोध्नु छ भने भनेर जवाफ दिएँ।
त्यसपछि हिजोसम्म उक्त व्यक्तिसँग कुनै सम्पर्क भएन।
घटना नं २, त्यसको दुई महिना जतिपछि ख नाम गरेको एकजना उपल्लो स्तरको नेता र मेरो शुभेच्छुकले मलाई फोन गरेर भन्नुभयो 'दाई मैले ग भन्ने नेताज्यूलाई फोन गरेर तपाईंलाई जसरी पनि मद्दत गर्नुपर्छ भनेको छु र उहाँको फोन नं … हो। उहाँ प्रमको एकदम नजिकमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई फोन गर्नुहोस्।'
मैले उहाँलाई फोन त गरिन तर दुई पटक भेट भयो। एक पटक होटेल सांग्रिलाको एउटा कार्यक्रममा र अर्को पटक नयाँबानेश्वरमा। उहाँले मलाई राम्रोसँग नै चिन्नु हुने रहेछ। उहाँ आफैं पनि विज्ञान पढेको व्यक्ति हुनु हुँदो रहेछ। त्यसैले आविष्कार केन्द्रको महत्त्वबारे आफैंले धेरै कुरा भन्नुभयो।
'हामी तपाईंलाई पक्कै सहयोग गर्छौं,' भन्नुभयो। मैले आविष्कार केन्द्रको बारेमा भनें र गतवर्ष सरकारलाई बुझाएको प्रस्तावको कपि दिएँ। प्रमसँग कुरा गरेर फोनमा सम्पर्क गर्छु भनेर भन्नु भयो। फोन आएन अनि मैले दुई महिना अगाडि उहाँलाई कुरा गर्नु भयो त भनेर एसएमएस लेखेँ।
तर जवाफ आएन र मैले पनि केही भनिन।
घटना न ३, पाँच महिना अघि भान्से टीमको घ भनिने अर्को प्रभावशाली नेतालाई पनि लाजिम्पाटमा भेटियो। भेट्ने बित्तिकै उहाँले भन्नुभयो- तपाईंको अभियानलाई मैले बाबुराम भट्टराईजी प्रम हुँदा पनि मद्दत गर्न खोजेको हो तर त्यतिबेला सकिएन तर अहिले त म सके सम्मको सहयोग गर्छु र प्रमसंँग कुरा गर्छु। अनि मेरो फोन पनि टिपेर लैजानु भयो। उहाँलाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको बारेमा सबै कुरा प्रष्टसँग थाहा छ। दुई महिना अघि उहाँले फोन गरेर मलाई आफ्नो निवासमा नै बोलाउनु भयो र भन्नुभयो, मैले प्रमसँग कुरा गरें। प्रमले यति धेरै पैसा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दियो भने त मलाई मारिहाल्छन् नि भन्नुभयो, के गर्ने र? मैले उहाँलाई भने- मैले आफ्नो लागि भिक्षा मागेको होइन। राष्ट्र निर्माणको लागि सहयोग मागेको हो र यदि प्रमलाई दिन मन छैन भने ठीकै छ। हामीले महादानबाट नै केन्द्र बनाउछौँ। मैले यसो भन्दा उहाँले सोध्नु भो, 'बीस करोडले हुन्छ कि हुन्न?'
मैले बीस करोड अनुदान र बाँकी ऋणको रुपमा दिए पनि हुन्छ भनेँ। उसो भए म फेरि प्रमसँग कुरा गर्छु र तपाईंलाई फोन गर्छु भन्नुभयो। केही फोन आएन। चुनावपछि मैले उहाँलाई दुई पटक एसएमएस लेखें तर जवाफ आएन।
घटना नं ४, चुनावभन्दा करिब दुई हप्ता अगाडि मलाई उद्योगमन्त्रीले फोन गरेर कहाँ हुनुहुन्छ दाइ भनेर सोध्नुभयो। मैले काठमाडौँमा छु भनेँ। उहाँले फुर्सद छ भने मन्त्रालय आउनुस् न त भन्नु भयो र म मन्त्रालय गएँ। उद्योग मन्त्रालयको तर्फबाट मैले के मद्दत गर्नसक्छु भन्नुभयो। मैले प्रष्टसँग भनेँ- आविष्कार केन्द्रलाई दिगो बनाउन १० मेघावाटको विद्युत बनाउन हामीलाई ५० करोड चाहिएको हो। तर यो कुरा उद्योग मन्त्रालयले दिन सक्दैन। त्यसैले उद्योग मन्त्रालयले मलाई कसरी मद्दत गर्न सक्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन।
उहाँले अहिले हामी के के कामहरु गर्दैछौं भनेर सोध्नुभयो।
मैले पनि हामीले गर्न गइरहेको मेडिकल ड्रोन, इभि, इन्क्युभेटर राइस हार्भेस्टर आदिको कामहरु हुनेवाला छ भनेँ। चुनावपछि एकदिन त्यहाँको सहसचिवले बोलाएर के के हुँदैछ भनेर सोध्नुभयो र मैले पनि मन्त्रीलाई भने कै कुरा भनें। सहसचिवजी ले हाम्रो प्रोपोजल माग्नुभयो र मैले सो प्रोपोजल वेबसाईटमा नै छ र डाउनलोड गर्न सकिन्छ भनेँ।
त्यसपछि त हिजो बेलुकी ६ बजेतिर उद्योगमन्त्रीले प्रेस सम्मेलन गरेर आँखा अस्पताल र आविष्कार केन्द्रलाई अर्को बर्षको बजेटमा सहयोग गर्ने भनेर घोषणा गर्नुभएछ। तर तथ्य कुरा के हो भने उहाँ चार/पाँच दिनमात्र मन्त्री पदमा रहनु हुनेछ। अर्को हप्ता नयाँ मन्त्री आउनेछ र नयाँ मन्त्री आएपछि नयाँ सचिव आउने छ। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्ने कुरा मैले चार बर्षसम्म र चार ओटा प्रधानमन्त्रीको पालामा भोगेको कुरा नै हो।
हिजो नै पैसा दिएको होइन भन्ने कुरा धेरै लाई थाहा नहुन सक्छ। त्यस्तो कुराहरुलाई राम्रोसँग नबुझिकन लिने नलिने भन्ने कुरा नै आउँदैन। एउटा नेताले बोलेको कुरा जति सुकै स्वच्छ हृदयले बोले पनि कति प्रतिशत पुरा हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा नै छ नि होइन र?
घटना नं ५, हिजो दिउँसो तिर मैले त्यत्ति कै ठट्टा गर्न घटना नं १ मा उल्लेख गरेको भान्से टीमको क नामक व्यक्तिलाई मद्दत गर्छु भनेको होइन त, खोइ त मद्दत गरेको? भनेर एसएमएस लेखें। बेलुकी ७ बजेर ४४ मिनेट जाँदा एक करोड पचास लाख भन्ने भन्ने जवाफ आयो। अनि मैले कसले?, कहाँबाट? कसरी? भनेर सोधें। उताबाट नम्बर दिँदै उद्योगमन्त्रीलाई फोन गर्नु भन्ने जवाफ आयो। अनि मैले रिसको झोकमा 'लाज लाग्दैन' भनेर लेख्दा त्यसको उत्तर यसरी आयो 'सर मसँग किन? म त सुरु देखि नै लागेको हो नि?
यदि माथि भनिएको क भन्ने व्यक्ति सुरु देखि नै लागेको भए किन उद्योगमन्त्रीलाई देखाउनु पर्ने? कत्ति न मैले उद्योग मन्त्री नचिनेको जस्तो गरेर चिनाउनु पर्ने? आफुले नै उद्योग मन्त्रीलाई भनसुन गरेर महावीर पुनलाई डेढ करोड दिए जस्तो गर्ने? त्यति धेरै आश्वासन दिने तर केही नगर्ने भान्से टीमलाई अब त्यसो नगर्नु होला है भनेर किन पाठ न सिकाउने?
यही पृष्ठभूमीमा हिजोको पोस्ट लेखिएको हो साथीहरु। मलाई गाली गर्ने र सराप्ने साथीहरुले मलाई र मेरो कामलाई नचिनेर र कुरा नबुझेर गाली गरेको हो भन्ने कुरा मलाई प्रष्टसँग थाहा छ। त्यसैले जति गाली गरे पनि मलाई पटक्कै रिस उठ्दैन। कति साथीहरुले 'महवीरलाई दिएको समर्थन फिर्ता' भनेर पनि लेख्नु भएको छ। ठीकै छ समर्थन फिर्ता लिए पनि। तर मलाई के कुरामा विश्वास छ भने उक्त फिर्ता लिएको समर्थन तपाईंहरुले फेरि दुई चार वर्षमा यतै फिर्ता गर्नु हुनेछ। यसो किन हुन्छ भने मैले मेरो लागि मात्र होइन कि तपाईंहरुको र सारा नेपालीको भलाईको लागि नै काम गर्दैछु। याद राख्नुहोस् कि गौतम बुद्धलाई पनि सुरुका दिनहरुमा धेरैले सराप्ने र गाली गर्ने गर्दथे। हेर्दै जानुस् र सम्पर्क राख्दै गर्नुहोस्। धन्यवाद।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २०, २०७४ १३:०५:२४